ရင်သွေးလေးမွေးဖွားပြီး ပထမဆုံးအကြိမ်ပရိသတ်တွေကိုနှုတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Kim Tae Hee – Trend.com.mm
Posted on March 21, 2018 by Noel
နာမည်ကျော်မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်တဲ့ Kim Tae Hee ဟာ ၂၀၁၇ခုနှစ်၊အောက်တိုဘာလက ချစ်စရာသမီးလေးတစ်ယောက်ကိုမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်။အနုပညာလောကနဲ့အနည်းငယ် အဆက်ပြတ်နေတဲ့သူမကတော့ ရင်သွေးလေးမွေးဖွားပြီးချိန်မှာ ခဏတာအနားယူ ခဲ့ပါသေးတယ်။၂၀၁၈ခုနှစ်၊နှစ်သစ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ ပရိသတ်တွေကို ပထမဆုံးအကြိမ် အဖြစ်သူမရဲ့ အင်စတာဂရမ်ကနေ နှုတ်ဆက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
မင်းသမီးချော Kim Tae Hee ဟာ သူမရဲ့အင်စတာဂရမ်မှာ ဆဲလ်ဖီပုံလေးနှစ်ပုံတင်ခဲ့ပြီး “ပရိသတ်ကြီးနေကောင်းရဲ့ လား၊အခုတလော ဘာတွေလုပ်နေလဲ?ကျွန်မကတော့ ပထမဆုံးအကြိမ်ကြေ်ာငြာရိုက်ကူးရေးပြန်လုပ်နေပါပြီ။ အပြင်မှာပိုပြီးနွေးထွေးလာတယ် လို့ထင်ခဲ့ပေမဲ့ ရုတ်တရက်ကြီးပြန်အေးလာပြန်ပါပြီ။ပရိသတ်ကြီးလည်း အအေးမိတာတွေ မဖြစ်အောင်ဂရုစိုက်ကြပါ။မကြာခင် ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားမှုတွေ နဲ့ပြန်လာနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်။အဲ့ဒီအချိန်ထိပရိသတ်ကြီးကျန်းမာအောင်ပျော်ရွှင်အောင် နေကြပါ! လို့နှုတ်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် မင်းသမီး Kim Tae Hee ရဲ့ ခင်ပွန်း Rain ကလည်း အခုလတ်တလောမှာ JTBC ရုပ်သံဌာနက ရိုက်ကူးနေတဲ့ “Sketch”
ဇာတ်လမ်းတွဲမှာပါဝင် သရုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ပရိသတ်တွေအတွက် သူတို့မိသားစုလေးရဲ့ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာပုံရိပ်တွေကိုပြန်ပြီးဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
နာမညျကြျောမငျးသမီးတဈလကျဖွဈတဲ့ Kim Tae Hee ဟာ ၂၀၁ရခုနှဈ၊အောကျတိုဘာလက ခဈြစရာသမီးလေးတဈယောကျကိုမှေးဖှားခဲ့ပါတယျ။အနုပညာလောကနဲ့အနညျးငယျ အဆကျပွတျနတေဲ့သူမကတော့ ရငျသှေးလေးမှေးဖှားပွီးခြိနျမှာ ခဏတာအနားယူ ခဲ့ပါသေးတယျ။၂၀၁၈ခုနှဈ၊နှဈသဈကိုရောကျတဲ့အခါမှာတော့ ပရိသတျတှကေို ပထမဆုံးအကွိမျ အဖွဈသူမရဲ့ အငျစတာဂရမျကနေ နှုတျဆကျခဲ့တယျလို့သိရပါတယျ။
မငျးသမီးခြော Kim Tae Hee ဟာ သူမရဲ့အငျစတာဂရမျမှာ ဆဲလျဖီပုံလေးနှဈပုံတငျခဲ့ပွီး “ပရိသတျကွီးနကေောငျးရဲ့ လား၊အခုတလော ဘာတှလေုပျနလေဲ?ကြှနျမကတော့ ပထမဆုံးအကွိမျကျွောငွာရိုကျကူးရေးပွနျလုပျနပေါပွီ။ အပွငျမှာပိုပွီးနှေးထှေးလာတယျ လို့ထငျခဲ့ပမေဲ့ ရုတျတရကျကွီးပွနျအေးလာပွနျပါပွီ။ပရိသတျကွီးလညျး အအေးမိတာတှေ မဖွဈအောငျဂရုစိုကျကွပါ။မကွာခငျ ဒီထကျပိုကောငျးတဲ့အနုပညာလှုပျရှားမှုတှေ နဲ့ပွနျလာနိုငျအောငျကွိုးစားပါမယျ။အဲ့ဒီအခြိနျထိပရိသတျကွီးကနျြးမာအောငျပြျောရှငျအောငျ နကွေပါ! လို့နှုတျဆကျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ပရိသတျတှရေဲ့ အခဈြတျော မငျးသမီး Kim Tae Hee ရဲ့ ခငျပှနျး Rain ကလညျး အခုလတျတလောမှာ JTBC ရုပျသံဌာနက ရိုကျကူးနတေဲ့ “Sketch”
ဇာတျလမျးတှဲမှာပါဝငျ သရုပျဆောငျနတေယျလို့သိရပါတယျ။ပရိသတျတှအေတှကျ သူတို့မိသားစုလေးရဲ့ ပြျောရှငျကွညျနူးစရာပုံရိပျတှကေိုပွနျပွီးဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ။